Unokwenza njani ukubeka ingxelo kwi-backlinks ekuphuculeni indawo yam yesayithi kwi-SERP?
Mhlawumbi uvile ulwazi oluninzi olubi malunga nokwakhiwa kweengxelo zangaphambili kunye nokungahambi kakubi kule nkqubo. Nangona kunjalo, ndifuna ukuba uthathe umzuzwana uze ufikelele kweli qhinga ngengqondo evulekile. Nangona ulwabiwo olubi lweli qhinga, ukusebenzisa iiblogi ukuphawula njengesicwangciso se-backlink kunokukunceda ukuba ube nobuhlobo obuhle kunye nabathengi bakho kunye nokwakha igunya lakho lokuthengisa kwi-market niche yakho.Nangona kunjalo, kufuneka ube neendlela ezichanekileyo zokudala izimvo ezilandelayo emva kokufumana isiphumo esihle se-SEO. Ngaphandle koko, uya kujongela ukukhankanya emehlweni enjini zokukhangela kwaye unokufumana izigwebo zezakhono zokwakha izixhumanisi ze-spammy.
Kule nqaku, siza kuxubusha iindlela ezintsha zokufumana i-juice yekhonkco kumazwana. Unakho ukulibala yonke into oyifunayo ngaphambili. Indlela esiya kukwabelana ngayo ayibukeka ngathi nayiphi na enye indlela yokwakha izalathisi ezifuna ukusebenzisa i-dofollow, nofollow, i-search or any other things you used to hear.
Indlela entsha yokufumana impendulo emva kwesikhokelo
Makhe sixoxe ngeziphi na amanyathelo ofuna ukuzilandela ukuze ufumane iimpendulo zezinga eliphezulu emva kwexesha elifutshane.
Fumana iiblogi ezifanelekileyo
Kwinqanaba lokuqala lokwakha iqela lakho, kufuneka ufumane iiblogi ezifanelekileyo zokudala izixhumanisi zakho apho. Kufuneka uqhube uphando lwakho lwe-market niche kwaye ufumane imithombo yewebhu efumana i-traffic kunye nokubandakanya. Akucaci ukuba ukhangele iiblugi zoshishino. Esikhundleni salo, unokufumana i-blogs PR okanye iifom ye-PR enomlinganiselo othile obalulekileyo abachazileyo abakhuphayo.
Ukufumana oko kukufunayo, unokufaka kuphela umbuzo othile kwiGoogle. Ngokomzekelo, ukuba ishishini lakho linikwe kwingingqi yonyango, unokucela injini yokukhangela umbuzo "I-blogs zezempilo ze-TOP" okanye "iifom zonyango. "Ngenxa yoko, uya kunika uluhlu lwe-TOP blogs ngokubhekiselele kwezinye izabelo zentlalo kunye namazwana abo bafumana iiblogi.
Emva kokuba ufumene ifanelekileyo ishishini lakho lifuna imithombo yewebhu, ungaqhubeka nokuxhoma ngamanqaku alandelayo avela kubathengi kwiblogi yabo. Kuya kukunceda ukwandisa isiseko sakho seesayithi zamaqabane.
Ukuhlela iiblogi zakho
Sebenzisa ukubhaliswa kwe-RSS kwi-Google Reader ukugcina ithrekhi yeeblogi kwi shishini lakho. Yakha iifolda ezahlukileyo kwiwebhusayithi nganye yesihloko. Ukuhlenga le nkqubo, uya kugcina ukuba yeyiphi iindidi ezinezithuba eziye zahlaziywa kutshanje.
Akucebiseki ukwakha amazwana emva kwesikhokelo esicasulayo ngendlela nje ebhala ngokungathandekiyo, izimvo ze-spammy. Ungaba ngowokuqala oshiya izimvo phantsi kweposi, kodwa emva kokuba ufunde ngokucokisekileyo kwaye ucinge ngokuphendula ngokunyanisekileyo nangokufanelekileyo.Ukuba iqhosha lakho eliphambili libandakanya kwaye linamathela kwinqanaba, abanye abavakalisi baya kucofa kuyo ukuze bahlole ukuba ungubani. Yingakho ukuba ungowokuqala, utshintsho lwakho luphezulu kunokuba ungena embukweni emva kokuba uninzi lwabavakalisi Source .